Iza amin'ireo karazam-pejin-tranonkala sy rafitra backlink no tsara indrindra ho an'ny SEO?
Eo am-pandinihantsika ny code andin-drakitra sy ny rafitra ampiasaina ho an'ny tanjona SEO, aleo aho manomboka amin'ny famaritana fototra fototra. Raha atao tsotra izao, ny rohy rehetra (raha tsy misy rohy Internet) dia teraka raha misy tranonkala iray mitondra URL ny làlana mankany amin'ny loharanom-baovaon'ny olon-kafa hafa ao amin'ny aterineto - amin'ny fametrahana references, na mampiditra izany URL. Ary ny rohy manontolo ao amin'ny rohy noforonina ho an'ny tranonkala dia mampifandray ny rohy. Amin'izany fomba izany, ny fitaovam-pikarohana lehibe toa an'i Google sy Bing dia mampiasa izany mba hamaritana ny sandan'ny tena, ny lazany ary ny maha-zava-dehibe ny tranonkala tsirairay na ny bilaogy amin'ny isa. Raha heverina fa tsy izy rehetra no voaorina ho mitovy, dia tsy hahavita na oviana na oviana intsony ny fivilian-tsavily tsy hay hadinoina noho ny isa ambony indrindra. Raha ny momba ny fananganana rohy organika ho an'ny tanjona SEO, ny zavatra dia ny fifandraisana amin'ny kalitao irery, fa tsy ny habetsahany.
Araka ny efa nolazaiko, tsy ny rehetra no teraka mitovy. Izany no antony, alohan'ny zavatra hafa rehetra, andao hizaha fahasamihafana eo amin'ireto rohy roa manaraka ireto. Raha ny marina, izy ireo dia miavaka amin'ny toetra manokana HTML ao amin'ny codeclasses, ary koa ny fiantraikan'ny ambaratonga eo amin'ny tranonkala rehetra amin'ny fomba fijery SEO.
Backlinks DoFollow dia ampiasaina mba tsy hampifandray pejy roa samihafa ary "misintaka" azy ireo fa ny famindrana sy fanamafisana ny mombamomba ny hatsaran'ny lafiny roa. Amin'ny fitenenana amin'ny ankapobeny, ny rindran-damina amin'ny DoFollow dia matetika fantatra amin'ny singa faran'izay manan-danja, rehefa tonga amin'ny fanomezana mari-pivoarana filaharana. Ity karazana rohy amin'ny tranonkala ity dia ampiasaina mba hanomezana fanombanana marika ho an'ny PA (autoriteur page), DA (tompon'andraikitry ny sehatra), PR (PageRank), ary ny sisa amin'ny metrics toy ny mpampiasa mpampiasa. Amin'ny ankapobeny, ireo rohy ao amin'ny tranonkala miaraka amin'ny toetra ao DoFollow ao amin'ny codeclasses azy dia nampidirina amin'ny famoaham-baovao, ary koa bilaogy na lahatsoratra. Indraindray hita ao amin'ny lahatsoratry ny forum sy ny sehatra fanehoan-kevitra.
Ny backlinks NoFollow dia natao hampifandraisana pejy roa miavaka, i. f. , indrindra ho an'ny sehatry ny fikarohana fotsiny. Midika izany fa ny fandefasan'ny fichier ny fichier NoFollow dia tsy mamela ny famindrana pejy handefasana alalana (na. K. ny. rohy jiro). Ataovy ao an-tsaina fa io fahasamihafana toa tsy ampy io dia manome fahamendrehana bebe kokoa amin'ny fikajiana sy ny fanasokajiana, ary koa ny fitomboan-draharaha goavana.
Backlink Code Structure ao amin'ny SEO
Inona no mahatonga ny firafitry ny backlinks amin'ny SEO? Raha ny marina, ny rohy rehetra miditra dia ahitana ireto singa fototra manaraka ireto: hypertext referenera marika, endriky ny marika famantarana ny mari-pamantarana, rohy referanda, ary ny famaranana.
Teraka miaraka amin'ny
ny rohy dia tokony hanaraka azy, dia azo sintonina ihany koa izy ary manana endri-tsoratra manokana mba hijanona amin'ny votoatin'ny lahatsoratra ao amin'ny pejy.
Ny rohy rehetra dia mifarana amin'ny marika famaranana, izay milaza fotsiny ny fitaovam-pikarohana momba ny fanakatonana ny rohy marindrano Source .